ရင်ခွင်တစ်​ခု ဖန်ဆင်းခြင်း: ဥာဉ်(၁)
“နှစ်ဆယ်ကျော် အပျိုဖျန်းကလေး တွေလို ဖူးစပွင့်စ အ လှမျိုး မဟုတ်သည့် တိုင်ခင်သက်ဝေမှာ သုံးဆယ် လောက်သာ ထင်ရ လောက် အောင်နုတုန်း ပျိုစဲပင်ရှိသည်။ ကို သန်းမောင်တို့ လို ကံမကောင်း အကြောင်း မလှ၍ မိန်းမလိုချင်ပါလျှက် မရကြ ရှာ သော လူပျိုသိုးကြီး များ သည် လည်းကောင်း၊ ငယ်ပင် ငယ် သော် ငြားလည်း မမကြီးများကိုမှ ကြိုက်တတ် ကြပါသော လူ ငယ် လူရွယ်များ သည် လည်းကောင်း ခင်သက်ဝေကို မျက်စိ ကျတုန်းပင် ရှိသေး သည်။”
“ ကို သန်းမောင် မောင်လေး ထွန်းလွင်ရှိလား”
အိမ်ရှေ့ ခြံဝက လှမ်းမေးသံကြောင့် ကိုသန်းမောင် ဖတ်လက်စ သတင်းစာကို အသာချကာ လှမ်းကြည့်လိုက် သည်။ ခြံဝ နှင့် အိမ်က ပေနှစ်ဆယ်မရှိ တရှိသာ ဝေးသည်မို့ မျက်မှန်တပ်ထားသော်လည်း ကိုသန်းမောင် ကောင်း ကောင်းမြင်ရသည်။ အိမ်ရှေ့ ခြံတံခါးနားတွင် ခင်သက်ဝေတစ်ယောက် နဖူးထက်မှာ လက်ကလေးကာ လျက် အိမ်ထဲသို့ ကြည့်နေသည်ကို တွေ့ ရသည်။
“အော် မခင်သက်ဝေပါလား အထွန်း သူ့ အမေဈေးသွားကြိုတယ် ဗျ ခုတင်ပဲထွက်သွားတာ။ မခင်သက်ဝေ ဘာ များ မှာချင်လို့ လဲ။”
ခင်သက်ဝေက အနည်းငယ် တွေသွားသည်။ ထို့ နောက် အိမ်ပေါ်မှ ဆင်းလာသောကိုသန်းမောင်ကို ကြည့်ရင်း
“ အော် ဘာမှ မှာစရာမရှိပါဘူး ကိုသန်းမောင် ကျွန်မ မောင်လေးထွန်းလွင်ကို ထမင်းစားလာဖိတ်တာပါ ဟိုတစ် ရက်က သူ အိမ်မှာ ကျွန်မ ကွန်ပျူတာလေး လာပြင်ပေးသွားတာ ကျေးဇူးတင်လို့ ….”
“ ဝင်ထိုင်ဦးလေ မခင်သက်ဝေ အထွန်း ပြန်လာတော့မှာပါ။ ”
ကိုသန်းမောင်က လောကဝတ်လုပ်ရင်း ခြံတံခါးကို အသာဖွင့်ပေးလိုက်သည်။ ခင်သက်ဝေက ခေါင်းအသာ ခါ လျက်
“နေပါစေ ကိုသန်းမောင် မဝင်တော့ဘူး။ ကျွန်မ ချက်ပြုတ်ထားတယ်လို့ သာသူ့ ကိုပြောလိုက်ပါ။ အိမ်… ထမင်း လာစားလှဲ့ လို့ နော်….ကဲသွားမယ် ကိုသန်းမောင်…..ပြောလိုက်နော်ဆက်ဆက်……”
“ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ …..ကျွန်တော်ကော မပါဘူးလား ဗျ…..”
လှည့်ထွက်သွားမည်ပြုနေရာက ခင်သက်ဝေက ကိုသန်းမောင်ကို လှည့်ကြည့်သည်။ ကိုသန်းမောင်က ပြုံးရယ် နေသဖြင့် ခင်သက်ဝေက အနည်းငယ် အိုးတို့ အမ်းတမ်း ဖြစ်သွားရာက အရှက်ပြေ ရယ်လိုက်ရင်း….
“ အဟင်း ..လာစားလှည့်ပါ ကိုသန်းမောင် အထွန်းလာတော့….”
သူ့ ကို မြန်မြန်ပြန်ဖြေရင်း ခင်သက်ဝေ ခက်သွက်သွက်ထွက်သွားသည်။ ကိုသန်းမောင်က တော့ ခင်သက်ဝေ ကို အသာငေးကြည့်ရင်း ကိုယ့်အတွေးနှင့်ကိုယ် ပြုံးလို့ သာနေမိသည်။ ခင်သက်ဝေက အရွယ်သာဟိုင်းလာပေ မယ့် လှချက်ကတော့ ရေဆေးငါးကြီးလိုပင် ချောချောကြီးရှိသေးသည်။
ခုတော့ အပျိုကြီးခင်သက်ဝေ ဖြစ်လို့ နေပေပြီ။ ကိုသန်းမောင်သည် ခြံတံခါး ကို အသာ ပြန်စေ့ရင်း ခင်သက်ဝေ အကြောင်းကို တွေးမိနေသည်။ ကိုသန်းမောင်တို့ ငယ်ငယ်က ခင်သက်ဝေဆိုတာ လူပျိုတိုင်းက မြင်တိုင်းကြည့် ကြည့်တိုင်းလှ တဲ့ မိန်းကလေးဖြစ်သည်။ ခင်သက်ဝေ လာပြီဟေ့ ဟုဆို လျှင် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကပဲဖြစ်ဖြစ်
လမ်းထိပ်က အုပ်ခုံမှာထိုင်ရာကပဲဖြစ်ဖြစ် လူပျိုအများ ခေါင်းကြီးများ ပင်လည်အောင်ကြည့်ကြရသည်။
ထိုအခါက ခင်သက်ဝေကလည်း ခုလို စကားကောင်းကောင်း မွန်မွန် ပြောတတ်သူမဟုတ်သေးပေ။ လှသ လောက် မာနက ငယ်ထိပ် ရောက်နေလေတော့ ရပ်ကွက်ထဲက လူပျိုမှန်သမျှကို သူ့ နဲ့ တူတယ် တန်တယ် ဟု ထင်သည် မဟုတ်။ အမှန်အတိုင်း ဝင်ခံရပါလျှင် ခင်သက်ဝေကို ကြိုက်တဲ့ အထဲ ကိုသန်းမောင်တို့ လည်း ပါ ခဲ့ သည်။
ခင်သက်ဝေရဲ့ နင့်နင့်သီးသီး ပြောဆိုခဲ့ သော စကားတွေကိုလည်း ရင်ကွဲပက်လက်ဖြင့်ကြားခဲ့ ဖူးပြီဖြစ်သည်။ ကိုသန်းမောင်တို့ အရပ်ထဲတွင် ခင်သက်ဝေ သည် သတင်းကြီးသော ရွှေမင်းသမီးဖြစ်ခဲ့ သည်ဆိုလည်း မှားလိမ့် မည်မဟုတ်။ ခင်သက်ဝေတို့ မိဘများသည် အတန်သင့်ပြည့်စုံကြသည်။ ဖခင်လုပ်သူ ဦးဘဟန်မှာ တရားရုံးချုပ် ရှေ့ နေကြီးဖြစ်သည်။ ခင်သက်ဝေ ကထိုအချိန်တုန်းကတော့ အင်မတန် မောက်မာသော မိန်းမလှတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ သည်။
ရှင်ပြုရဟန်းခံပွဲတွေ ဆိုရင်ဖြင့် ခင်သက်ဝေမပါလျှင် ပွဲကမစည်ကားဘူးဟုပင် ပြောကြဆိုကြသည်။ ကွမ်း တောင်ကိုင် ပန်းတောင်ကိုင် တို့ တွင် ခင်သက်ဝေက အဝင်းဆုံးအဝါဆုံး အချောဆုံး အလှဆုံး၊ လူပျိုတွေက လည်း ရှင်ထမ်းသည်က နည်းနည်း ခင်သက်ဝေကို ငမ်းသည်က များများဖြင့် ခင်သက်ဝေတို့ အလှသတင်းကြီး ခဲ့ လေသည်။
ကြိုက်တဲ့ သူချစ်တဲ့ သူများကလဲ ခင်သက်ဝေ နားတွင်အင်မတန်မှ ပေါများသလောက် ခင်သက်ဝေကတော့ တစ်ခါဆို ဆိုသလောက် မှတ်သွားအောင် ပညာပြပြလွှတ် သည်။ ခင်သက်ဝေ စနက်မိလို့ အရှက်ကွဲရသူ အသည်းတွေ ကွဲရသူများ ရိုက်သတ်လို့ ပင်ကုန်မည်မထင်။ ခင်သက်ဝေကိုယ်တိုင်လည်း ခေါင်းခေါက်ရွေးလို့ရတယ် ဆိုပြီး ရွေးလာလိုက်တာ ယခုဆိုလျှင် သုံးဆယ်ကျော်ရာက လေးဆယ်နားပင်နီးလို့ လာခဲ့ ပြီဖြစ်သည်။
သို့ တိုင်ခင်သက်ဝေတို့ ကလှတုန်းလှဆဲပင် ဖြစ်သည်။ နှစ်ဆယ်ကျော် အပျိုဖျန်းကလေး တွေလို ဖူးစပွင့်စ အ လှမျိုး မဟုတ်သည့် တိုင်ခင်သက်ဝေမှာ သုံးဆယ်လောက်သာ ထင်ရလောက်အောင်နုတုန်း ပျိုစဲပင်ရှိသည်။ ကို သန်းမောင်တို့ လို ကံမကောင်းအကြောင်းမလှ၍ မိန်းမလိုချင်ပါပဲလျက် မရကြရှာသော လူပျိုသိုးကြီး များ သည် လည်းကောင်း၊ ငယ်ပင်ငယ်သော်ငြားလည်း မမကြီးများကိုမှ ကြိုက်တတ်ကြပါသော လူငယ်လူရွယ်များ သည် လည်းကောင်း ခင်သက်ဝေကို မျက်စိကျတုန်းပင်ရှိသေးသည်။
ခင်သက်ဝေကလည်း အပျိုလေးက အပျိုကြီးဖြစ်လာတော့ မျက်နှာကြော အနည်းငယ်လျော့သွားသည်မှ လွဲ၍ အရပ်ထဲလမ်းသွားလျှင် မျက်နှာကိုချီလျှက် သွားတုန်း လာတုန်းပင်ဖြစ်သည်။ ငါ့ကြိုက်နေတဲ့ သူတွေ ရှိပါသေး လားဟူသော အသိကလေးဖြင့် သူလည်း အားတင်းထားဟန်တူပါသည်။ သို့ တိုင်သူမကတော့ အပျိုကြီးဟူ သောဘွဲ့ ကို လက်ကိုင်ထားရစဲ ဖြစ်လေသည်။
“အဲ…လေးသန်း ..ပြုံးစစ နဲ့ ဘာဖြစ်နေတာလဲ သတင်းစာကြီးကိုင်ပြီး..ဟမ်…”
ခင်သက်ဝေအကြောင်းတွေးလျက် ပြုံးဖြီးဖြီးဖြစ်နေသော ကိုသန်းမောင်တစ်ယောက် ထွန်းလွင်အသံကြောင့် သတိပြန်လည်လာသည်။ တူလုပ်သူကို လှည့်ကြည့်ရင်း လူကြီးရှက်တော့ရယ်ဆိုသလို ရယ်သံလေးစွက်၍
“အဟင်း…ဟုတ်ပါဘူးကွာ သဘောကျလို့ ပါ…မင်းကလဲ…”
“အလို ဗျာ…ကျွန်တော်က မလဲပါဘူး…လေးသန်း ကဘာတွေတစ်ယောက်တည်း သဘောတွေခွေ့ နေတာလဲ.. လုပ်စမ်းပါဦး…ကျွန်တော့်ဦးလေး လူပျိုသိုးကြီး….တွေ့ ထားပြီလား….”
ထွန်းလွင်က ကိုသန်းမောင်ကို ရယ်သွေးလျက် စသည်။ ကိုသန်းမောင်က စက်တီကုလားထိုင်ပေါ် တင်ပျဉ်ခွေ ပြင်ထိုင်လျက်
“အင်း…ခုဏက ခင်သက်ဝေလာသွားတယ်ကွ….မင့်ထမင်းစားလာဖိတ်တာတဲ့ …ဟိုနေ့ က သူ့ ကွန်ပျူတာ ပြင် ပေး လို့ တဲ့ထမင်းကျွေးချင်သတဲ့ …အဲတာ မင့်လာဖိတ်တာ…မတွေ့ တော့ အပျိုကြီး ရှက်ရှက်နဲ့ ပြန်သွား လေရဲ့ …”
“အင်းလေ မမသက်ဝေက ထမင်းစားလာဖိတ်တာ နဲ့ လေးသန်းပြုံးတာနဲ့ ဘာဆိုင်လဲ…ပြီးတော့ရှက်ပြီးပြန်သွား ရအောင် လေးသန်းက ဘာလုပ်လိုက်လို့ လဲ….”
ထွန်းလွင်က ကိုသန်းမောင် ရှေ့ ကုလားထိုင်တွင် ဝင်ထိုင်ရင်း နားမလည်ဟန်ဖြင့်မေးသည်။ ကိုသန်းမောင်က ထွန်းလွင်ကို မျက်လုံးကြီးပြူးလျှက်….
“အင်…အောင်မယ် မင်းက မမသက်ဝေတွေ ဘာတွေတောင်ဖြစ်နေပါ့လား…အဟား..အထွန်းခွေးကောင် မင်း ဦးလေးကို မပြောဘဲ ဘာတွေ ရှုပ်ထားလဲပြောစမ်း …….”
“အာ…..ဗျာ သူက မမသက်ဝေလို့ ခေါ်ဆိုလို့ ခေါ်တာပါဗျာ…သူ့ ဆိုက်က လေးသန်းတို့ ဆိုက် ကျွန်တော်တို့ ဆိုက် ဟုတ်ဘူး….ကျွန်တော်နဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး…ကဲပါ ….သူ ရှက်သွားအောင် လေးသန်းက ဘာပြောလိုက်လို့ လဲ”
အထွန်းက မျက်နှာတည်နဲ့ ပြောသည်။ ကိုသန်းမောင်က တူဖြစ်သူကို အသေချာအကဲခတ်နေသည်။ ထွန်းလွင် ရုပ်ကြည့်ရတာ ခင်သက်ဝေမှိုင်းမိပုံတော့မရပေ။ ကိုသန်းမောင်သည် ခင်သက်ဝေမှိုင်းမိသော မျက်နှာမျိုးကို အလွတ်ပင်ရနေပြီ ဖြစ်သည်။
“ပြောပါဘူးဘူးဗျာ သူကမင်းကို ကွက်ဖိတ်တော့ ငါကလည်းမေးလိုက်တာပေါ့ ကျွန်တော်ကော မပါဘူးလားလို့လေ…အဟီး ခင်သက်ဝေ ရှက်သွားတာ မျက်နှာကြီးကို နီလို့ ….”
“ဟာ ဗျာ လေးသန်းကတော့ လုပ်တော့မယ်…..ကျွန်တော်က ရိုးရိုးကူညီတာပါ…ဘာလဲ…လေးသန်းက ဆင်ဖြူ တော်မှီပြီး ကြံစုပ်ဦးမလို့ လား….ဟားဟား…..”
ထွန်းလွင်က တူရယ်သာပြောတယ် ကိုသန်းမောင် အစ်မအကြီးဆုံးက မွေးသည်ကြောင့် အသက်ချင်း ဆယ်နှစ် ဆယ့်ငါးနှစ် လောက်သာ ကွာသည်။ ထွန်းလွင်က ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ ရပြီးစဆိုတော့ နှစ်ဆယ်ကျော် ရှိသေးသည်။ ကိုသန်းမောင်က သုံးဆယ်ကျော် လေးငါးခြောက်နှစ်။ တူဝရီးထက် အစ်ကိုကြီး နှင့်ညီလို ပင်ဖြစ် နေသည်။
“အောင်မာ….မင်းကများ ဟေ့ကောင် သန်းမောင်တို့ က ခုထိမိန်းမ မရသေးပေမယ့် အစွမ်းအစ မရှိတဲ့ ကောင် မဟုတ်ပါဘူးကွ…ခေတ်မကောင်းလို့ …ရူးချင်ယောင်ဆောင်နေတာ….”
“ဘာလဲ…မမသက်ဝေကြီးကို စောင့်နေတာလား…လုပ်လေ လေးသန်းရဲ့ အသက်တွေက မစောင့်တော့ဘူးနော်။ မမသက်ဝေကြီးတောင် ဟိုင်းနေပြီ လူကလှပြီးနုနေလို့ သာ….”
ထွန်းလွင် ဦးလေးလုပ်သူကို စကားနာထိုးနေသည်။ တူဝရီးနှစ်ယောက် စကားကောင်းနေတုန်း ဈေးကပြန်လာ သော ထွန်းလွင်၏ မိခင်ဒေါ်တင်တင်လှကြောင့် စကားစပြတ်သွားသည်။
“ဟဲ့ သန်းမောင် နင်ငါ့သားကို ဘာတွေ သင်ပေးနေတာလဲ…ဟွန်းနော် ငါ့သားလေး ငယ်ငယ်လေးရှိသေးတာ… ပေါက်တတ်ကရတွေ သင်မပေးနဲ့ ….အထွန်း……အမေဟင်းချက်မယ်…ရေလေး ကဲ့ ပေးဦး….”
“အလို ဗျာ မမကြီးနှယ်…………ကျွန်တော်က သင်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူး…မမကြီးသားကသာ……”
“လေးသန်း…..တော်…… မဟုတ် တရုတ်တွေမပြောနဲ့ ….လာပြီအမေ..လာပြီ။ အလားကား လေးသန်းကြီးက ….မိန်းမလိုချင်နေတာ……ဟားဟား”
ထွန်းလွင်က အမေလုပ်သူ သူ့ ဘက်လှည့်လာမည်စိုး၍ ကိုသန်းမောင်ကို အတင်းစကားပိတ်ပြောပြီး ရေခပ်ရန် အိမ်ပေါ်မှ ပြေးဆင်းသွားသည်။ ထွန်းဝေမျက်လုံးထဲ တွင်တော့ ခင်သက်ဝေ၏ နေ့ လည်စာ ထမင်းဝိုင်းကိုသာ မြင်ယောင် နေသည်။ ခင်သက်ဝေ အပြုံးချိုချိုတွေနဲ့ ဆို အိမ်မှာထက်တော့ ထမင်းစားကောင်းသည်ပဲလေ။
******************* ********* ********* ***********************
“စားစား မောင်လေး ကောင်းရဲ့ လား ငါးမြင်းဗိုက်သား ဆူကလည်းဆူ နဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးပေါပေါလေးနဲ့မမကိုယ် တိုင်ချက်ထားတာ ….ထည့်စား….. ဟော ဒါလေး က ဘူးရွက်ဟင်းခါးလေး …”
ထွန်းလွင်ကတော့ ခင်သက်ဝေ ကိုကြည့်ုလိုက် ငါးမြင်းဗိုက်သားတွေကို စားလိုက်၊ ဘူးသီးဟင်းခါး ကို တရွှတ် ရွှတ်သောက်လိုက် ဖြင့်ထမင်းများစားလို့ မိန်လှသည်။ ခင်သက်ဝေက ထမင်းပွဲဘေး ကြုံ့ ကြုံလေးထိုင်ရင်း ယပ် တောင်လေးခပ်ခါ ခပ်ခါဖြင့် ထွန်းလွင်စားတာကို သူ စားနေရသလို နှင့်ဝနေသည်။
“ကောင်းလိုက်တာ မမသက်ဝေရာ လက်ရာကတော့ ရှယ်ပဲ….နောက်ကျရင်….မမသက်ဝေ ကွန်ပျူတာကြီး ခဏ ခဏ ပျက်ပါစေတောင် ဆုတောင်းရမလို ဖြစ်နေပြီ။ ”
နောက်ဆုံးထမင်းလုပ်ကို အရသာခံဝါးရာက မမျို ချင့် မျိုချင် မျိုချက်လျက် ထွန်းလွင်က ပြောသည်။ ခင်သက် ဝေက လေသံလေးမျှင်းကာ ရယ်ရင်း…………
“အမယ်လေးတော် ကွန်ပျူတာတော့ မပျက်ပါရစေနဲ့မင်းစားချင် လာစားလှည့်ပေါ့ကွယ်…..တို့ အိမ်မှာက အ ဒေါ်နဲ့ မှ နှစ်ယောက်ရှိတာ….ဟင်းဟင်း…..”
ခင်သက်ဝေ မိဘတွေဆုံးတော့ မိခင်ဖြစ်သူ၏ညီမ အဒေါ်ဒေါ်စိန်မြ နှင့်သာ နေလာရသည်။ အဒေါ်လုပ်သူက ခပ်လှမ်းလှမ်းကထိုင်ရင်း ခင်သက်ဝေ စကားကြောင့်ချောင်းဟန့် သည်။ ခင်သက်ဝေက အဒေါ်လုပ်သူကို မျက်စိလေး စွေကြည့်ရင် ထွန်းလွင်ကို သွားလေးဖြဲကာပြုံးပြသည်။
ထွန်းလွင်ကလည်း ခင်သက်ဝေ စကားကြောင့် သူ့ ဦးလေး သန်းမောင့်မျက်နှာကြီး မြင်မိပြီး အူထဲက လှိုက် လှိုက်ပြီး ရယ်ချင်လာသည်။ စကားရော ဖောရောနှင့် ခင်သက်ဝေ ရယ်တုန်း ရော၍သာ ရယ်လိုက်ရ သည်။ ခင် သက် ဝေကလဲ လှသည်။ ဟင်းချက်ကလည်း ကောင်းသည်။ အမေ ကတစ်နှစ် တစ်ခါတောင် ဖြစ်ဖြစ်မည် ချက် တတ်သော ခင်သက်ဝေ၏ ငါးမြင်းဗိုက်သားကလဲ ဆူသည်။
“စားကောင်းရဲ့ လားမောင်လေး….ကဲစား ဒီမယ် ကောင်းမှကောင်း မြကျောက်တွေ ချိုတာကွယ်….မင်းကြိုက်ရဲ့လား တောင်မသိဘူး။ ဟိုနေ့ ကဈေးထဲ တွေ့ လို့ ဝယ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်ထားတာ….ဟင်းဟင်း…”
ထွန်းလွင်သည် ခင်သက်ဝေ၏ ဟင်းဟင်း..ဟင်းဟင်း ဆိုသော ချိုအီအီရယ်သံနှင့်ရောကာ မြကျောက်သရက် သီးစိတ်ကြီးတွေကို အတင်းမျိုမျိုချနေမိသည်။ ဦးလေးသန်းမောင်တို့ သတ္တိနဲ လို့ သာ ဒီလို ချိုချိုအီအီကြီးတွေ မ စားရတာဟု တွေးလျှက်က ရယ်ချင်လာပြန်သည်။
“တော်တော် ချိုတာပဲ မမသက်ဝေ မမ မျက်နှာလိုပဲ ..ဟဲဟဲ…မမကွန်ပျူတာက ဟောင်းနေပြီ။ လက်ပ်တော့ပ် လေးဘာလေးဝယ်ပါတော့လား… ပိုလည်းသုံးလို့ ကောင်းတာပေါ့…ရုံးလည်း ယူသွားလို့ ရတာပဲကို…”
ခင်သက်ဝေက ထွန်းလွင်၏ ပြည်တီတီ စကားကြောင့် ရင်ဖိုရင်းက တဝက်တပျက်ကြာလိုက်ရသော လက်ပ် တော့ပ် ဟူသောစကားကို လေသံဖမ်းလျှက် ရမ်းတုတ်လိုက်ရသည်။ ထွန်းလွင်လေးက စကားတတ်သည်ဟု လည်း စိတ်ထဲက မှတ်လိုက်မိသည်။ ခင်သက်ဝေမျက်နှာကလည်း ချိုသလို သူမ အသံက ပိုလို့ ပင်ချိုကာ အီ ၍ပင်နေလေသည်။
“အင်း ဝယ်နိုင်သေးပါဘူ ငါ့မောင်ရယ် မင်းသိတဲ့ အတိုင်း လက်ပ်တော့ပ်တွေက ဈေးကခပ်ကောင်းကောင်း ရယ် လေးငါးဆယ်သိန်းကြီးတောင် မတတ်နိုင်ပါဘူး….”
ခင်သက်ဝေက ရင်ကလေးချီ၍ ခေါင်းတခါခါ လည်တခါခါဖြင့် ခပ်ညည်းသည်းလေး ပြောသည်။ ထွန်းလွင်က တော့ မြကျောက်သရက်သီးတွေကို ပဲစားကောင်းကောင်းနဲ့ စားနေမိသည်။ ခင်သက်ဝေကလည်း ထွန်းလွင်၏ အကြည့်စူးစူးတွေ အောက်တွင် လှိုက်ရင်းဖိုရင်း ပြုံးရင်းရယ်ရင်းနှင့် ကြည့်နူးမဆုံးဖြစ်နေသည်။ ဒီခေတ်လူငယ် တွေများ ရင်ခုန်အောင် သက်သက်လုပ်ကြည့် တတ်လေသလားဟု ခင်သက်ဝေတွေနေမိသည်။
ထွန်းလွင်က ကွန်ပျူတာပျက်ဖို့ ဆုတောင်းရမည်မဟုတ်။ သူ ဆုတောင်းရမှာဟုလည်းစိတ်က တွေးတွေးပြီး ထွန်းလွင်ကို စကားတွေ ဖောင်ဖွဲ့ အောင်ပြောနေသည်။ ထွန်းလွင်က သူ့ မျက်စိအောက်တွင်ပင် အရွယ်ရောက် လာသော ကောင်လေးဖြစ်သည် ကတစ်ကြောင်း၊ အဖေမတူ အမေမတူ ဖြူဖြူ ပြည့်ပြည့် ချောချော မွေ့ မွေ့လေး ကရှိသည်ကတစ်ဖုံ၊ ပညာလေးကလည်း တတ်လိုက်ပြန်တော့ ခင်သက်ဝေမျက်လုံးထဲ ထွန်းလွင် သည် ဖြောင့်ဖြောင့် ရောင့်ရောင့်ဖြင့်ကြည့်လို့ အင်မတန်ပင်ကောင်းနေသည်။
“မင်း အလုပ်ဝင်တော့မှာလား။ ကျောင်းပြီးတာ မကြာသေးဘူး မို့ လား….”
“ဟုတ်ကဲ့ အလုပ်က ထင်သလောက်မလွယ်ဘူး မမသက်ဝေရ ဒါပေမယ့် လေးသန်း သူငယ်ချင်း ကုမ္ပဏီတစ် ခုမှာတော့ပြောထားတယ် ကျွန်တော်ယူထားတဲ့ ဘွဲ့ လေးနဲ့ လဲကိုက်တော့ အဲဒါလေးတော့ရမယ်ထင်တယ်..”
“ဟုတ်လားကောင်းတာပေါ့ ကိုသန်းမောင်တို့ က အပေါင်းအသင်း ကောင်းတာပဲနော်…လစာကော ဘယ်လိုလဲ … ကောင်းရဲ့ လား….”
ထွန်းလွင်နဲ့ စကားပြောရပြီးရော ဆိုပြီးခင်သက်ဝေ စကားပြောနေလိုက်သည်မှာ သူကိုယ်တိုင်ထမင်း မစားရ သေးတာပင် မေ့လို့ နေသည်။ အဒေါ်လုပ်သူက ဆာလှပေါ့ထင်သည် ခဏခဏ ချောင်းဟန့် နေသည်။ ခင်သက် ဝေက မသိဟန်ပြုကာ ထွန်းလွင်ဘက်ကိုပင် စောင်းထိုင်းလျှက် စကားတွေကောင်းနေတော့သည်။ ထွန်းလွင် ကလည်း ငါးမြင်းဆီပြန်မျက်နှာကြီးကိုရော ခင်သက်ဝေ၏ ချောချောလှလှ မျက်နှာကြီးကိုရောထောက်ကာ စ ကား မရှိစကားတွေ ရှာပြောနေသည်။
နောက်ဆုံးတော့ အဒေါ်လုပ်သူ ဒေါ်စိန်မြက ထမင်းဝိုင်း ထသိမ်းကာမှပင် စကားစပြတ်ကာ ထွန်းလွင် ပြန်သွား သည်။ ခင်သက်ဝေက တော့ ဗိုက်ထဲ ပြည့်နေသည်ဟုဆိုကာ သူ့ အခန်းထဲဝင်သွားသည်။ အဒေါ်ကတော့ ဆာ ဆာ နှင့် ပင် ခင်သက်ဝေ စသွားသော ထမင်းဝိုင်းကို လက်စသတ်ရလေတော့သည်။
Posted by yangonthar at 2:17 AM